सुवास नेम्वाङको मोबाइलमा गाउँलेको म्यासेजः के तपाईंलाई भोक लाग्छ ? रातमा निन्द्रा लाग्छ ? – Kathmandutoday.com
सुवास नेम्वाङको मोबाइलमा गाउँलेको म्यासेजः के तपाईंलाई भोक लाग्छ ? रातमा निन्द्रा लाग्छ ?
काठमाण्डु टुडे २०७७ पुष २९ गते ७:२६ मा प्रकाशित
काठमाण्डु, २९ पुस– नेकपा विभाजनको असर राजनीतिज्ञलाई मात्र होइन महत्वपूर्ण ओहोदामा बसेका ठूलाबडालाई पनि परेको देखिन्छ । राजनीतिक मित्रहरू धेरै भएका उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीहरू समेत नेता तथा कार्यकर्ताको गुनासो सुन्न बाध्य छन् ।
गृहजिल्ला संखुवासभा र गृहनगर खाँदबारी भएका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियालाई नेकपाको वैधानिकताबारे सोध्दै धेरै जनाले ‘महत्वपूर्ण पद र स्थानमा हुनुहुन्छ । अब जिल्लाले शीर उँच पार्ने कि नीच ?’ भनेर म्यासेज पठाउन थालेका छन् ।
उनीहरूका अनुसार, निजामती सेवाको उच्च तहबाट सेवानिवृत्त भइसकेको र अरु पाँच बर्ष संवैधानिक जिम्मेवारीमा रहने हुनाले अब उत्पात् कमाउन र गुमाउन नपर्ने हुँदा थपलिया नेतृत्वको आयोगले न्याय दिने विश्वास गरिएको छ । नेकपाका एकजना कार्यकर्ताले आफूले ‘नाम र शीर उँचो पार्ने हो भने कानुनबमोजिम निर्णय गर्नुको विकल्प छैन, कलंकको टीका नलगाउनुहोस्, फलानोको दाइ, भाइ, बाउ, काका, भिनाजु, ज्वाईंले यस्तो नराम्रो काम ग¥यो भनेको सुन्न नपरोस् है !’ भनेर सचेत गराउँदै थपलियालाई जानकारी गराएको बताएका छन् ।
उनीहरूका अनुसार हामीजस्ता अगुवा कार्यकर्तालाई स्पष्टसँग जवाफ नदिने हो भने तल्लो तहमा रहेका कार्यकर्तासँग कसरी भिज्ने ? अवस्था अप्ठेरो छ । तर, बालुवाटारले जात्रा र तमाशा देखाएको छ । गुह्य कुरो खुलाएको छैन । उनीहरू भन्छन्– ‘आफ्नो कारण जनता र मुलुकले दुःख नपाओस् भनेर सोच्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले उल्टो सोच्नुको कारण बुझिनसक्नु छ ।’ संविधानमा एक थोक लेखिएको छ, काम अर्कै गरेपछि जिल्लामा रहेकाहरूले आँखामा पट्टी बाँधेर गान्धारी नै हुनुपर्ने अवस्था आएको गुनासो छ । जनआस्था साप्ताहिकबाट